२o७५ असार २७ बुधबार
काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंकको कञ्चनपुरस्थित पुनर्वास शाखाको एक समारोहका बिच पुनर्वास नगरपालिकाका मेयर जिवन राज थापाबाट समुद्घाटन भएको छ ।
बैंकले मुलुक भर २२६ शाखा कार्यालयहरु, २१८ एटिएम, १४ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर एवं ११ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग ईकाई मार्फत बैंकिङ्ग सेवाप्रदान हारिरहेको छ ।
बैंकको वासलातको आकार रू.१७८अर्ब भन्दा बढि पुगेको छ भने कुलनिक्षेप करिब रू. १५१ अर्बपुगिनिजीक्षेत्रबाट स्थापित बैंकहरु मध्ये नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंक तथाकुलकर्जा करिब रू. १२०अर्ब सहितनिजीक्षेत्रका बैंकहरु मध्ये दोस्रो ठूलो बैंकको रुपमा बैंकले आफ्नो पहिचान बनाउन सफल बह्येको छ ।
हालसम्म यस बैंकमाग्राहकको संख्याकरिब ११ लाख७५ हजार रहेको छ ।